पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : डा. महत (अन्तर्वार्ता) | Himalaya Post
पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : डा. महत (अन्तर्वार्ता)
Posted by Himalaya Post | १९ मंसिर २०७८, आईतवार १३:५१ |
डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री रहेका छन् । संविधानसभा सदस्य उनले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गरे । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा महत परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका डा महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको केही अंश :
हो, कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन नसकेको पनि छ । भातृ सङ्गठन गठनदेखि अरू कतिपय विषयहरूमा यो अवस्था देखियो । तर मूल कुरा त पार्टी सभापतिजीले पार्टी एकतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुभयो । पार्टीमा कुनै पनि खाले विग्रह र असन्तुष्टि नबढोस् भन्नेमा उहाँ बढी नै सजग रहनुभयो । नेपालका कम्युनिष्टहरूबीचको एकताका कारण नेपाली कांग्रेस संसदमा सानो दल भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा जसरी पनि पार्टीलाई एक बनाएर अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ र पार्टीले अबको निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने नै उहाँले मूल लक्ष्य राख्नुभयो । पछिल्लो समयमा संसद्मा झण्डै दुईतिहाई अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत विग्रह र असन्तुष्टिहरू आए र फुट्यो । यो अवस्था हेर्दा त पार्टी सभापतिले लिएको रणनीति सही हो भन्ने नै देखियो ।
भ्रातृ सङ्गठनका अधिवेशनहरू पनि सुरुका दिनमा अघि बढेकै थिए । तर, पनि मैले पहिले भनेजस्तै त्यसमा पनि पार्टीभित्र सबैको सहमति जुटाएर लैजानेभन्दा त्यसमा शिथिलता आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यी कार्यमा पनि सभापतिजीले बहुमतको निर्णय गरेर अघि बढ्न चाहनुभएन तर सर्वसम्मति पनि जुट्न सकेन । जसका कारण यी कार्य पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । जे होस्, अहिले पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जाँदैछ, यो पनि एक उपलब्धि नै हो ।
अहिले हामी महाधिवेशनमा जुटेका छौँ, यो महाधिवेशनले चयन गरेको नयाँ टिमले आगामी कार्यकालमा सशक्त र चुस्तरूपमा काम गर्नेछ र पार्टीलाई नयाँ र सशक्त स्वरुपमा रुपान्तरण गर्नेछ ।
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो । त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए । तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे ।
तर, उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुपर्यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुपर्यो ।
उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुपर्यो भनेका हुन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुपर्यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
जस्तो कि पार्टीले मलाई जिम्मा दियो, नेविसङ्घको अघिल्लो कार्यकालको अधिवेशन गराएँ । जुन बडो कठिन अवस्था थियो, तर मैले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरेँ, अधिवेशन सम्पन्न गराएँ । पार्टीले कोभिडको समयमा पनि मेरो संयोजकत्वमा कोरोना समिति गठन गर्यो र काम लगायो । मैले कोभिड महामारी भनिन । हिमालदेखि तराईसम्म पुगेँ र अनुगमन गरेँ, काम गरेँ र पार्टी र सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाएँ । त्यसैगरी सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी जुन दिइएको थियो, त्यसप्रति पनि मैले न्याय गरेको छु । यस पदको जे–जस्तो गरिमा र जिम्मेवारी हो त्यो मैले कुशलतापूर्वक बहन गरेकै छु ।
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन रु त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन रु यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन रु तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन रु यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मार्यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार जुन बिपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउनुभएको थियो त्यो विचारलाई पनि हामीले संस्थागत गरेर लैजानु छ । यसका लागि कमीले यो लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई जीवन पद्दति बनाउनुपर्छ । त्यो अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसले घनीभूत बनाउनुपर्छ ।
उतिबेलै बिपी कोइरालाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस सुरु गर्नुभएको थियो । यसको अर्थ यो हो कि देशमा समृद्धि सिर्जना गर्ने र समृद्धिको पहुँचमा सबै नेपालीलाई पुर्याउने नै हो । अबको पार्टीको विचार र बहसलाई हामीले यसतर्फ पनि परिलक्षित गर्नुछ ।
नेपाली कांग्रेसका हरेक नेता कार्यकर्तालाई हामीले काम पाइएन भन्ने नबनाउन हरेक विभागहरू गठन गर्ने, प्रशिक्षण गाउँगाउँसम्म पुर्याउने । अहिले ठूलो युवापङ्क्ति पार्टीमा जोडिएको छ उनीहरूलाई सङ्गठन निर्माणमा पूर्णरूपमा लगाउने । यसले नेपाली जनताले कम्युनिष्टको कुशासन र बेथिति जुन जनताले देखेका छन् त्यसको पनि भण्डफोर गर्ने । नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हामीले पार्टीलाई पु¥याउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अबका सबै चुनावहरूमा कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यही ढङ्गबाट अब पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पार्टीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा निर्वाचनको एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ, यसलाई अबका निर्वाचनहरूसम्म नै पुर्याउनुपर्छ र अब आउने सबै निर्वाचनहरूमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यी सबै कामलाई महामन्त्रीजस्तो पार्टीको सक्रिय पदाधिकारीमा रहेर मैले अगाडि बढाउने छु ।
मुलतः त्यो भ्रमण भारतको सत्तारुढ दलको आमन्त्रणमा नेपली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भएको हो । मैले अघि नै भनेँ कि हिजोको अपरिपक्व र ढुलमुले नीतिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘ड्यामेज’ गरेकै हो । हामीले वैदेशिक सहायता लिने काममा होस् या विदेश नीति सञ्चालन गर्दा पनि अत्यन्तै परिपक्वता आवश्यक छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रभागमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा देशलाई एक र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु हुँदैन । यस्तो भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस् या अरु बेला नै किन नहोस् आफ्नो देशको फाइदा हेरेर नै कुरा गर्ने गर्दछु । त्यसरी आफ्ना देशको पक्षमा कुरा राख्दा उहाँहरूले सहजरूपमा लिएको पाएँ ।
यसपालिको भारत भ्रमणमा पनि मैले यो पक्षलाई जोड दिएको हो । हाम्रा दुई देशबीचका कतिपय असमझदारीहरूलाई पनि मैले त्यहा राखेँ । ठोस, स्पष्ट र आधारसहित मैले हाम्रा मुद्दाहरू राखेँ । त्यहाँ रहँदा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्ष, भारतीय विदेशमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेँ । यसबाट हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका साथै भारतीय सरकार र हाम्रो सरकारबीचका कतिपय मुद्दाहरूमा कुराकानी भयो र यसबाट द्विपक्षीय समझदारीहरूमा वृद्धि भएको छ ।
Previousशहीदको बलिदान व्यर्थ जान दिइने छैन : पूर्वमन्त्री बीना मगर
Nextसात वर्षदेखि जोरपाटी-साँखु सडक अलपत्र
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०९:०६
युवालाई उद्यमशील बनाउन बिनाधितो तीन लाखसम्म कर्जा दिदै चाँगुनारायण नगरपालिका
५ चैत्र २०७७, बिहीबार ०८:५९
भुटानविरुद्ध टस हारेर ब्याटिङमा उत्रियो नेपाल
२३ आश्विन २०७५, मंगलवार ०७:५६
२९ मंसिर २०७८, बुधबार २१:५५